Roobabka isku dhafka ah: waxa ay yihiin, sida ay u dhacaan iyo astaamaha | Saadaasha Shabakadda
Sidaan ognahay, waxaa jira noocyo badan oo roob ah marka loo eego asalkiisa iyo astaamahiisa. Maanta waxaan ka hadlaynaa roobab wada. Waxaa sidoo kale loo yaqaan magaca roobka qulqulka. Waa roobab ay soo saaraan hoos u dhac ku yimaada cadaadiska Hawada heer deegaan. Waxaa loo abuuray sidii inay daruuro u yihiin jid toosan roobka ay ka baxaanna badanaa way badan yihiin.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegaynaa wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato roobabka isdaba jooga ah iyo sida ay u bilowdaan.
1 Roob iyo samaysnaan
2 Roobab isku dhafan
3 Asalka roobka
4 Astaamaha ugu muhiimsan
Roob iyo samaysnaan
Waxa ugu horreeya ee muhiimka ah in la ogaado waa sida ay ugu dhacdo roobab. Marka hawadu dusha kuleylka kuleyliso, kor bay u kacdaa. Meesha loo yaqaan 'troposphere' heerkulkeedu wuu ku yaraadaa joogga, taasi waa, kolba inta aan sii soconno, waa ka qabow, markaa marka hawadu kacdo, waxay ku dhacdaa hawada ugu qabow oo weynaataa. Marka la buuxiyo, waxay isku ururisaa dhibco yaryar oo biyo ah ama kiristaalo baraf ah (waxay kuxirantahay heerkulka hareeraha hareeraheeda) waxayna ku wareegsan tahay qaybo yar yar oo dhexroor ka yar laba mikroone loo yaqaan uumiga uumiga uumiga ah.
Roobab isku dhafan waxaa lagu soo saaraa kor u kaca hawo diiran iyo hawo qoyan. Dhulku wuu kululaanayaa gobollada qaar in ka badan kuwa kale. Dhammaan waxay kuxirantahay dhulka dushiisa iyo dhacdooyinka shucaaca qoraxda. Isla taas ayaa ku dhacda nooca dhirta ka kooban meel walba. Astaamahani waxay keenaan in kuleylka loo wareejiyo hawada kuwaas oo ah qaybaha ugu sarreeya uguna eg qaabka xumbo. Markay sare kacdo, heerkulku wuu isbadalaa wuuna difaacaa ilaa uu ka noqdo xumbo hawo qabow. Xaaladda ay hawadu ku raran tahay qoyaan, daruur baa samaysanta oo waa marka hawsha uumiga ay dhacdo ka dibna roobabku soo dhacaan.
Ifafaalaha dabiiciga ah ee roobabku Waxaa sidoo kale abuuri kara nooc ceeryaamo ah. Tani waxay u oggolaaneysaa sare u qaadista tooska ah ee hawada qoyan oo la xiriirta geeddi socodka qulqulka waana mid lagu garto gobollada kulul iyo kuleylkaba. Layaab ma leh in dhacdadan ay soo noqnoqoto inta lagu jiro xilliyada kuleylaha iyo gobollada leh cimilo qabow badan. Waxay badanaa ku dhacaan duufaano waxayna la yimaadaan hillaac iyo onkod.
Waxay ku dhacdaa dhulal leh astaamo fidsan ama leh cilado yaryar oo xagga muuqaalka guud ah. Meelahan waxay leeyihiin joogitaan hawadeed qoyan oo diirran oo abuura samaynta daruuro nooca Cumulonimbus ah.
Roobabkani waxay soo bilowdaan markii cufnaanta hawadu ee heer kulkeedu sarreeyo ay la kulanto biyo mareenka sida webiga. Waxay keentaa kulankan heer kulkiisu kala duwan yahay, inuu sameeyo daruur si dhakhso leh u qaboojisa uumiga biyaha oo soo saaro roobab mahiigaan ah oo culus.
Marka shucaaca qoraxda si xoog leh ugu dhufto dusha sare ee dhulka, dhulku wuu kululaadaa. Marka uumiga biyuhu kaco wuxuu noqdaa mid buuxa oo wuxuu taabanayaa qaybta ugu sareysa jawiga. Markay hawadu sare u kacdo, waxay gaadhaa heer-kul hoose waxayna noqota cidhiidhi tan iyo markay la kulmaan barta dharabka. Tan macnaheedu waa in heerkulka uumiga biyuhu uu la mid yahay heerkulka uumiga.
Si roobabku u gaadhaan daruuraha waa inay horey u sameysmayeen kadib geedi socodka buuxinta uumiga biyaha. Tani waxay keentaa roobab inay ka samaysmaan dhibco waaweyn oo biyo ah.
Aynu aragno astaamaha ugu waaweyn ee roobabku ku soo baxaan:
Roobka waxaa soo saarey durdurro kacsan mahadda hawadda. Hawadaani way kacdaa wayna dhaqaaqdaa iyada oo ay ugu mahadcelinayaan unugyada isdaba-marinta ee caanka ah
Hawada ayaa kor u kacda si lama filaan ah sababo la xiriira is-waafajinta yar ee ay hawadu ku hareeraysan tahay, taasoo abuuraysa jeebado hawo ah oo u eg buufin.
Markay hawadu qabowdo waxay gaaraan heerkul ku dhow barta dharabka.
Markay uumiga hawadu bilaabmo, daruurtu waxay bilaabataa inay sameyso oo roob ka dhaliso gobolka ay sameysay.
Roobab isku dhafan Waxay caan ku yihiin gobollada kuleylka ah ee kuleylka iyo hawo kulul ay ka jiraan. Badanaa waxaa la socda hillaac iyo hillaac waxayna sababtaa duufaanno koronto.
Waa roobab sidoo kale dhalin kara roob dhagaxyaale.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad waxbadan kaga baran karto roobab biyoodka wata iyo astaamahooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Roobab isku dhafan